Voangona ve ny voan'ny Apple? Cyanida ao amin'ny Apples
Voangona ve ny voan'ny Apple?
Cyanide amin'ny voa Apple
Apemba, miaraka amin'ny serizy, paiso, ary amandy, dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana rose. Ny voan'ny pòm sy ireo voankazo hafa dia ahitana ny zavatra simika voajanahary izay mampidi-doza amin'ny biby sasany. Manapoizina ny olombelona ve izy ireo? Indro ny fijery ny poizina misy ny voa apetraka.
Toxicity of Seeds Apple
Ny voan'ny Apple dia ahitana sivana kely kely, izay poizina mahafaty, fa ianao kosa dia voaaro amin'ny poizina avy amin'ny loko sarotra.
Raha mihinana voa apetraka ianao, dia mamakivaky ny rafi-pandaminana misy anao izy ireo. Raha mihinana tsara ny voany ianao, dia hohajaina amin'ireo zavatra simika ao anaty voa, fa ny poizina misy poizina ao anaty paoma dia kely loatra ka ny vatana dia afaka manala azy mora foana.
Firy ny voa nambolen'i Apple namono anao?
Ny cyanide dia mahafaty eo amin'ny dosie eo amin'ny 1 milligram per kilograma lanjan'ny vatana. Amin'ny ankapobeny dia misy 0,49 mg ny voan-javamaniry misy voanio. Ny isan'ireo ambioka isaky ny apple dia miovaova, fa misy paoma sy voanio valo, noho izany dia mirakitra 3.92 milligrams of cyanide. Olona iray lanja 70 kilao no mila mihinana 143 voa mba hahatongavana amin'ilay dihy nahafaty na 18 pòm manontolo.
Ny voankazo sy legioma hafa misy cyanide
Ny zavamaniry cyanogenika dia novokarin'ny zavamaniry mba hiarovana azy ireo amin'ny bibikely ka afaka manohitra ireo aretina izy ireo. Ny voankazo vato (abriko, prints, fiononana, boka, paoma, kiririoka, paiso), kernelazo mangidy no mampidi-doza indrindra.
Ny root Cassava sy ny fikolokoloana bamboo koa dia misy glycosides cyanogenic, izay antony mahatonga ireo sakafo ireo dia mila omanina alohan'ny fampidirana.
Ny voankazo na ny fihinam-boa dia misy hippogsynine. Ny ampahany kely amin'ny ackee izay azo hanina dia ny nofo mihintsy manodidina ny masomboly mainty, ary avy eo dia aorian'ny fiterahan'ilay voankazo voajanahary ary misokatra eo amin'ilay hazo.
Ny potato dia tsy misy glycoside cyanogenic, fa misy ny gllyalkalkaloids solanine sy chaconine . Tsy manala ireo akora misy poizina ireo ovy. Ny fofom-paty maitso dia ahitana ny haavony avo indrindra.
Ny fihinanana horonam-peo na mofomamy tsy miteraka dia mety hiteraka aretim-po, fihenan-tsakafo, tebiteby, boka, ary aretina. Tsy fantatra ny simika izay tompon'andraikitra amin'ny soritr'aretina. Mampidi-doza ny aretina.
Na dia tsy misy poizina aza, dia mety hanandrana "off" ny karaoty raha voatahiry miaraka amin'ny vokatra izay mamoaka etylène (ohatra: apples, melons, tomates). Ny fihanaky ny etyolinina sy ny voan'ny karaoty dia mamoaka tsiranoka mangidy toy ny solika.
Voly Ester vs Polyester Resins
Fananiham-bolo, pens, ary akora
Fiarovana ara-pahasalaman'ny composites
Fikarohana siantifika amin'ny teny siantifika
Nahoana no mampitombo ny tavy fisotro madio ny fampidirana sira?
Ny fomba fiarovan'ny safonify
Inona no Afo Mampidi-doza?
Oxi Cloth hanaisotra ny hoditra Skunk
Ny Chemistry Tsara Indrindra
University of Richmond GPA, SAT sy ACT Data
Ny tantaran'ny lalamby
Tadiavo ny fon'ny vehivavy vehivavy iray
40 Sary mampihetsi-po amin'ny vahoaka
Fantaro ny teny Japoney Jitsuwa
10 Soso-kevitra amin'ny fampiasana ny fehintsoratra
Understanding Economics: Fa maninona ny vola no manan-danja?
Fahatakarana ny rafi-pifidianana voalohan'i Canada tamin'ny voalohany
Franklin Pierce - Filohan'ny faha-14
Fahalalan'izao tontolo izao (fianarana amin'ny fiteny)
Dash Lights: Ny Hazavana Battery eo amin'ny tabilaoo
10 Fantatra amin'ny sehatra sikhism ny sehatr'izy ireo amin'ny fomba ofisialy
Famaritana ny teny frantsay Baiser
Inona avy ireo tsingeramboaran'ny Eagle Double?
Leonardo, Michelangelo & Raphael: Karazan'ny Renaissance Italiana
Nohazavaina ireo boribory boribory
Mitohy ny adihevitra momba ny serasera Shakespeare
Inona avy ny eschatolojia?
Top 10 Women amin'ny alàlan'ny fiaramanidina Alpine
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny ranomasina?
Sekolin'ny andro tsy miankina any New York City